Faa’iidooyinka & Faa’iido Darooyinka Guurka Dadka Ajnabiga Ah – Allsomali.net
HomeArimaha QoyskaFaa’iidooyinka & Faa’iido Darooyinka Guurka Dadka Ajnabiga Ah
10 January 2021 allsomali Arimaha Qoyska, Wararkii Ugu Dambeeyay 0
In aad guursato qof Ajnabi ah ma ahan go’aan fudud laakiin waa go’aan adag waliba muhiim ah sidaas darteed waxa uu u baahanyahay daraasadayn weyn.
Wiil ama gabadh marka ay guursanayaan qof Ajnabi ah waxa ay leedahay faa’iidooyin iyo waliba faa’iido darooyin badan oo dhinac walba ah.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa faa’iidooyinka iyo faa’iido darooyinka Ajnabiga.
Faa’iidooyinka Guursiga Qof Ajnabi ah:
1.Helitaanka Dhalasha Dalka Qofka Aad Guursanayso:
Hadii aad tahay wiil oo aad guursato gabadh Ajnabi ah waxa shaki la’aan ah wakhti yar guurkaaga in aad heli doontidi dhalashada dalka ay ka soo jeedo gabadha aad guursato waana sababta ay inta badan Dumarka iyo Ragga Somalidu u raadiyaan in ay helaan qof ka soo jeeda dalalka reer galbeedka gaar ahaan America iyo Yurub.
2.Gabadha Ajnabiga ah ma ahan mid qaali ah:
Arintan ayaa khusaysa Ragga kuwaas oo ku dhibaatooda in ay si jaban ku helaan dumarka Somalida sidaas darteed gabadha Ajnabig ah ayaa ka jaban gabadha Somalida iyada oo ay dhici karto in ay iyadu iska bixiso meherkeeda iyo wax walba oo guurka ku baxaya.
3.Mustaqbalka Caruurta Oo Fiicnaanaya:
Qaar ka mid ah Ragga ama dumarka Somalida ayaa Ajnabi u guursada iyaga oo ka fikiraya Mustaqbalka caruurtooada kuwas oo ay doonayaan in ay ku dhashaan dalalka reer galbeedka.
Faa’iido Darooyinka Guurka Ajnabiga ah:
Halkan waxa aan ku soo bandhigi doonaa faa’iido darooyinka guurka Ajnabiga.
1.In aanu jirin Isku dheelitir:
Isku dheelitirka ayaa ah waxa ugu muhiimsan guurka sidaas darteed hadii uuna jirin isku dheeli tir labada qof ee lamaanaha ah waxa ay sabab u noqonaysaa in uu Guurku fashilmo waana faa’iido darada ugu horaysa maadama uuna jirin isku dheelitir dhanka bulshada iyo dhaqanka labada qof.
2.Kala duwanaanshaha labada qof:
Labada qof ee is guursaday ayaa ku kala duwanaan kara meelo badan sida shaqanka iyo waliba fikir ahaan taas oo keenaysa in uuna guurkaas helin daganaansho.
3.Saamaynta Dhaqan ee Ubadka:
Arintan ayaa khusaysa dumarka, marka ay Gabadh Somali ah guursato Nin Ajnabi ah waxa ay keenaysaa in ay saamayn ku yeelato dhaqanka caruurta.
Marka aynu eegno in Caruurtu mar walba lagu xisaabiyo dhanka Aabaha hadii ay tahay qabiil ahaan iyo bulsho ahaan waxa dhib noqonaysa in ay caruurtu ku abtirsadaan Somali maadama uu Ninku yahay Nin Ajnabi ah.
Sida aan ognahay Somalida Qabiil ayaa lagu kala gartaa sidaas darteed arintaas ayaa saamayn ku yeelanaysa caruurta u dhalata labada qof.
U Gaar Ah Dumark: Gabadhey Gacaliyahaagu Hadii Uuna 3-dan Tayo Lahayn Isgaa Fogow.